Thwebula Vuze 5.7.4 – Windows – Vessoft
Vuze – a isofthiwe ukwabelana amafayela phakathi BitTorrent abasebenzisi inethiwekhi. Isofthiwe ine uhlelo ayo ukuze useshe ulwazi izindawo ezihlukahlukene zezifufula, uhlu zazo ezingasetshenziswa ukuhlelwa bese agcwaliswa. Vuze ukusebenzisa izici ezilandelayo ewusizo: izilungiselelo of the download and ulayishe, ukulawulwa thwebula eziza kuqala, ikhono ukungena kokukude, siqu izinkonzo zalo video, njll Vuze iqukethe esakhelwe video player and Converter esenza ukuguqula ifomethi ngoba amadivayisi ahlukahlukene.
Search for ulwazi izindawo ezihlukahlukene zezifufula
izilungiselelo Flexible thwebula futhi layisha
isidlali esakhelwe ngaphakathi
English, Afrikaans, Українська, Français... BitComet 1.44
Abadlali Media Isofthiwe lokwabelana ukuba thwebula amafayela emidiya. Isofthiwe iqukethe search engine enamandla ukuthola ngokushesha amafayela ezidingekayo.
Akwazi ukugcina Ithuluzi defrag amadrayivu nge anhlobonhlobo izici ewusizo. Isofthiwe ikuvumela ukuba basebenze ngezimo of defragmentation kanye nokwenza.
English, Українська, Français, Español... Notepad++ 7.3 Standard futhi Portable
Umbhalo abahleli Umhleli umbhalo okuyinto is kabanzi phakathi program. Isofthiwe ligxile ukuhlela kanye ukufomatha umbhalo okulotshwe C ++ ulimi lokwakha.
English, Afrikaans, Українська, Français... Facebook Video Downloader 3.17.17
Downloaders Imenenja esikahle ukulanda video amafayela kusuka Facebook namanye amasevisi ethandwa. Isofthiwe kwenza ukuguqula amavidiyo e takhiwo ehlukahlukene alalelwayo kukhishwe amathrekhi audio kusukela isiqophi amafayela.